FreeAccess Plus!: Miasa manoloana ny fibahanana Web 2.0 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Janoary 2019 4:17 GMT
Mifototra amin'ny itatra Firefox Access Flickr nataon'i Hamed Saber, izay ahafahan'ny mpiserasera miala amin'ny sivana misy ankehitriny ao Iran sy any amin'ny firenena vitsy hafa izay manakana ny Flickr, tranonkala malaza fizarana sary, namoaka ny “FreeAccess Plus!” koa ny developera Iraniana iray hafa, MohammadR, itatra mamadika ny Firefox ho ao amin'ny proxy izay manala ny sivana ao amin'ny tranonkala malaza toy ny YouTube, del.icio.us, Flickr, Technorati.com, FriendSter.com, livejournal.com, MySpace, Hi5 ary ny hafa. Maro amin'ireo tranonkala ireo no voasakana ao Iran.
Tena afa-po tamin'ny vaha “FreeAccess Plus!” azony tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Iraniana i MohammadR. Ao amin'ny Balatarin (izay midika hoe ny “ambony indrindra” amin'ny teny Persiana), endrika Iraniana amin'ny Digg, olona 23 no nifidy tantara midera ny fanitarana FreeAccess Plus! ho toy ny “manao fahagagana” (معجزه میکنید).
Nanoratra momba ity itatra ity talohan'ny nahitana azy tao amin'ny tranokala “Mozilla Addons” ny sasany tamin'ireo bilaogera Persiana malaza,” hoy i MohammadR tamin'ny Global Voices Advocacy. “Tamin'ny herinandro voalohany monja, efa nisy nitroka in-150 ny FreeAccess Plus!. Ankehitriny, taorian'ny iray volana monja namoahana azy, dia efa nisy nitroka in-3500 mahery izy,” hoy izy nanampy.
Nilaza i MohammadR fa tsotra ny fametrahana ny FreeAccess Plus! (jereo ny lahatsary fampianarana etsy ambany). “Mandehana fotsiny miditra ao amin'ny “https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6139“, sy eo amin'ny farany ambanin'ny pejy dia tsindrio ny bokotra” Install Now”. Hisy varavarankely vaovao hipoitra avy eo izay mangataka aminao mba hanamafy ny fametrahana, ary tsindrio indray ny “Install Now”. Mariho fa mila mamelona indray Firefox ianao vao mety ny itatra.”
Apetraho fotsiny ny plugin ary avereno alefaso ny mpitety (“navigateur”); ary ny Firefox no hanao ny ambiny! Ho afaka hiditra ao amin'ny Youtube, Flickr, MySpace ary ny tranonkala rehetra voatanisa ao amin'ny pejy fanampiny ianao.
Ny endriky ny “FreeAccess Plus!” ankehitriny dia tsy manohana ny safidy hanampy vohikala ao amin'ireo izay efa voatanisa. Nilaza i MohammedR, na dia izany aza fa ity endri-tsoratra – lisitra azo ovaina sy amboarina ity- dia ho ampidirina amin'ny endrika manaraka amin'ny programa.
Manantena i MohammedR fa hanampy ireo mpiray tanindrazana aminy amin'ny fialàna amin'ny sivana izay mikendry ny tranonkala sosialy ny plugin “FreeAccess Plus!”. “Tsy faly tamin'ny fanakanana tsy ara-drariny ny web 2.0 sy ny tranonkala tambajotra sosialy ny ankamaroan'ireo bilaogera Iraniana” hoy izy.
P.S: Raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny sivana amin'ny web 2.0 sy ny fanoherana ny sivana, dia jereo azafady ny Access Denied Map.